Mmiri mmiri ozuzo: njirimara, ụdị na otu ha si arụ ọrụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ngwa eji meteorolo ji arụ ọrụ gburugburu ụwa yana nke kachasị mkpa anyị hụrụ pluviometer. Okwu a sitere na pluvio nke putara mmiri ozuzo na site na mita nke na-ezo aka n'ihe ya. Ya mere, nlele mmiri ozuzo bụ ngwaọrụ eji atụ mmiri. Ejikọtara mmiri ozuzo a na ọdụ ụgbọ elu ọ bụkwa mmewere nke na-enye nnukwu ozi iji mara ma ihu igwe ma ihu igwe dị ebe. A na-achịkọta ngwa ahịa niile mmiri ozuzo site na ngwa ọrụ a.
N’ebe a ị nwere ike ịchọpụta etu etu mmiri ozuzo si arụ ọrụ yana mkpa ọ dị na ihu igwe na ihu igwe.
1 Kedu ihe bụ mmiri ozuzo
3 Otú o si arụ ọrụ
4 Ofdị mmiri ozuzo
4.2 Ihe ngụkọta
4.4 Ugboro abụọ tipping ịwụ
Kedu ihe bụ mmiri ozuzo
Nke a bụ ngwaọrụ eji nwee ike ịlele mmiri mmiri ozuzo nke na-ada na mpaghara n'oge oge ụfọdụ. A na-edekọ data data mmiri ozuzo a ruo n'ókè nke na enwere ike iji ya dozie mpempe akwụkwọ data ihu igwe maka mpaghara ahụ. Site na data niile anakọtara, a na-eme nkezi mmiri ozuzo site na ọnwa, kwa afọ, iji hụ otu mmiri ozuzo si agbanwe oge.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mpaghara nwere nkezi mmiri ozuzo kwa afọ nke ihe dịka 500 mm, a maara nke a n'ihi na ederela data mmiri ozuzo ọtụtụ afọ. Ihe izizi izizi bidoro afọ 1800. Mmasị mmiri ozuzo nwere ike ịnakọta data n'ụdị mmiri ozuzo ọ bụla dịka lluvia, toonụ, nieve, sleet ma ọ bụ drizzle. Na foogu ma ọ bụ igirigi enweghị ike ịlele ya ebe ọ bụ naanị nsị mmiri.
Isi ihe bara uru bu ike tụọ ọdịda ihu igwe nke mpaghara iji nwee ike igosipụta data dị iche iche.
Agbanyeghi na odi ka odi ka oge a, etu mmiri si ezo Edere ya kemgbe 500 BC. Ndị Greek bụ ndị izizi mmiri ozuzo. Ka oge na-aga, na India, ha enweela ezigbo nchịkọta mmiri ozuzo. Ha debere ihe ndi ozo na ihe ndi ozo ka ha nwee ike ijide mmiri ozuzo ma nwee ike itule ya. N'okwu ndị a, atụghị oke mmiri ozuzo maka ebumnuche nke ịmepụta ndekọ na data maka ịkọwa ihu igwe nke otu mpaghara. O nyeere aka mee ka ihe ọkụkụ dị mma.
Kwa afọ tụrụ atụ mmiri ozuzo ịmara ụdị mmiri dị maka ihe ubi. Mkpa ịtụ oke mmiri ozuzo sitere na mkpa ọrụ ugbo. Ihe odide nke okpukpe nke enwere na Palestine nke kwuru banyere otu oke mmiri ozuzo siri metuta inweta mmiri di nkpa n’eji agba ihe banyere ubi a bu eziokwu a. Ya mere, n'oge ahụ, ma inye ma ọrụ ugbo bụ naanị ihe dị mkpa. Ha achọghị data ahụ maka ịkọwa ihu igwe ma ọ bụ amụma ihu igwe.
Otutu mgbe emechara na 1441 na Korea, emere ihe nlere izizi nke ọla eji ọla kọpa were meghee ọkọlọtọ. Mmiri mmiri ozuzo a jere ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200, mgbe na 1639, Benedetto Castelli, onye na-eso ụzọ Galileo Galilei, jisiri ike mee nhazi mbụ nke mmiri ozuzo na Europe. Emere aka a ma gosi ọkwa mmiri nke dị ebe ahụ ruo ọtụtụ awa.
Na 1662, e mepụtara akpa mmiri ozuzo na bọketị na-agbada. Ejiri ngwaọrụ a dee ọ bụghị naanị data mmiri ozuzo kamakwa data ihu igwe dị ka ikuku ikuku na ikuku ikuku.
A ghaghị itinye ngwaọrụ ahụ n'ebe dị elu ka o wee nwee ike idekọ ọkwa mmiri ozuzo. N'ụzọ dị otú a, ọ gaghị enwe ụdị nsogbu ọ bụla na-emetụta ya. N'oge a na-atụle, akpa ahụ na-amalite ịchekwa mmiri mmiri ozuzo nke nta nke nta, mgbe emechara ya, Dabere na mmesa ị kaa akara, ọ ga-abụ mmiri ozuzo na mpaghara ahụ.
O nwere ike ịtụ mmiri ozuzo, akụ́ mmiri igwe, snow, drizzle, na udu mmiri, ọ bụ ezie na ọ naghị atụ alụlụ ma ọ bụ igirigi. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọ bụ ihe odide nke mmiri ụmụ irighiri mmiri na enweghị ike tụọ ya na akara dị na iko ahụ. Ọ na-edozi ya ma nwee akụkụ yiri oghere iji kpokọta mmiri.
Ifuru 55062 ...
Ọ bụ ụdị ndị a kacha ahụkarị. Ọ bụ ihe ngosi dị mfe ma kwụ ọtọ na-egosi oke mmiri ozuzo na-ezo na mpaghara. Ihe mejuputara ya bu ihe nkedo na onu ogugu. Ogologo mmiri ọ na-eru bụ otu nha ọkwa nke ọdịda. A tụrụ ya na millimita.
Ofdị mmiri ozuzo a bụ otu n’ime ihe ziri ezi. Ọ bụ ha na-ahụ maka ịnakọta mmiri dabara na olulu. Ogwurugwu a na-emegharị mmiri na arịa nke gụsịrị akwụkwọ. A na-etinye ha n'otu oke dị elu site na ala ma a na-edekọ mmiri mmiri kwa awa iri na abụọ. Naanị mmejọ nke ihe ngosi mmiri ozuzo a bụ na enweghị ike ịchọpụta oge nke mmiri ozuzo ahụ mere.
Jiri ụdị mmiri ozuzo a oge nke ọdịda nwere ike mara nke ọma. Ọ mejupụtara drum na-agba agba na-agba ọsọ na-agba ọsọ mgbe niile. Ọ gụsịrị akwụkwọ na mkpịsị odee nke na-ese n'elu mmiri. Ọ bụrụ na ọ bụghị, pen na-akara akara akara.
Ugboro abụọ tipping ịwụ
Ngwaọrụ a na - anakọta mmiri site na olulu ma na - eduga ya na obere ịwụ nwere triangular nwere ike iji ọla na plastik mee. Ọ nwere mgbatị na etiti etiti itule. Ozugbo ọ ruru mmiri ozuzo a na-atụ anya ya, nke na-abụkarị 0,2 mm, mgbanwe nghota na-aputa na bọket nke ọzọ, ebe bọket mbụ gụrụ ọzọ.
Ihe dị mkpa nke nlele mmiri ozuzo adịwo kemgbe Gris oge ochie. Agbanyeghị na mbụ ọ bara uru naanị iji melite ala ubi, ọ dị mkpa iji kwado nkwa nri nke ndị bi na ya. Kemgbe ọtụtụ afọ, mkpa ọ dị na-ebili n'ụzọ dị iche iche nke na ọ na-eje ozi ọ bụghị naanị maka ihe ọkụkụ, kamakwa iji tụọ mmiri ozuzo maka ọmụmụ banyere ihu igwe gburugburu ụwa ma nwee ike ịchọpụta mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nlele mmiri ozuzo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ngwaọrụ gbasara ihu igwe » Pluviometer